Denmark oo dib uga laabaneeysa go’aan ay sharciga kala noqotay qoysas soomaali ah | Somaliska
Qoysas soomaalida Deenmark ka mid ah oo horey dowladda sheegtay in ay kala noqotay sharciayda islamarkaasina dalkoodi dob loogu celin doona, ayaa haatan waxaa soo baxaya warar sheegaya in go’aankas dowladdu ka laabatay.
Wargeyska Politiken ee ka soo baxa dalkaasi oo amuurtan wax ka qoray ayaa sheegay in toddobo qoys oo soomaalida dalkaasi ah horeyna looga ceshtay sharcigga ay haatan dib uga looga laabtay go’aankaas ka dib, ka dib markii ay dhaleeceyn kala kulantay hey’addaha u dooda xaquuqda aadanaha iyo qaxootiga dalkaasi. Hey’adahan ayaa sheegay in qoysaskan oo Soomaaliya lugu celiyaa ay ka iman karto xaalad qatar ah oo soo wajhada carruuraha ka dhashay Deenmaark. Sidoo kale hey’adda ayaa ku eedeysay dowladda inaaneeyn sameeyn qiimeyn sax ah oo la xirriira qoysaskaasi.
Dhinaca kale waxaa jira qoysas kale oo soomaali ah oo iyagana ka mid ah sideeda boqol ee la sheegay in qiimeeyn lugu sameeyn doono kiisaskooda, kuwaas oo weli sugaya jawaabo la xirriira sida arrinkooda laga yeelayo, waxaana ay cabasho ka muujiyeentalaabadda dowladda oo ay arkaan mid ka baxsan xaquuda aadanaha.
Wasiiradda dalkaasi u qaabilsan is dhexgalka Inger Støjberg, ayaa kal hore sheegtay in ay ku adkeeysaneeyso dib u celinta soomaalida ee aan u baahneyn magangalyo dhab ah, kalsoonina ay ku qabto hey’adda ay maamusho go’aanadda ay gaarto.